China Flat Top Kabuki Hexagon High-density multi-functional Flawless Powder Brush Foundation borosy makiazy mpanamboatra sy mpamatsy | Dongmei
Flat Top Kabuki Hexagon High-density multi-functional Flawless Powder Brush Foundation Borosy borosy
Momba an'ity entana ity
Famolavolana 1.Unique: borosy mavesatra miendrika petal dia fitaovana fampifangaroana lehibe, lanja maivana, mateza, boribory ahazoana aina. Tena tsara ny mitazona ny borosy makiazy, ary mihatra amin'ny famaranana malefaka. Ny mpihazona borosy makiazy dia tena mety.
2. Borosy tsara kalitao mety tsara ho an'ny makiazy mineraly: mifanaraka tsara amin'ny satron'ny Bare Mineral.
3. be mpampiasa: borosy makiazy marobe ampiasaina amin'ny vovoka, fototra, fotaka ary aloky ny maso mihitsy aza.
4. Mahazo aina amin'ny hoditra: ny fahatsapana malefaka feno, mora ampiasaina, volon-doha sentetika miaraka amin'ny super plush, malama, azo ampiasaina mandritra ny fotoana lava, azo antoka ho an'ny hoditra mora tohina.
Volo material Volo sentetika
Material Plastika na fitaovana hafa mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa
Loko Custom, toy ny fangatahan'ny mpanjifa
Toetoetra Maharitra, malefaka, salama
Loko sy habe ho an'ny ferrule sy tahony volo Azo namboarina
Fonosana Afaka manao fonosana namboarina ho anao izahay, raha tsy manao afa-tsy kitapo opp ho anao izahay.
Santionany Maimaimpoana na mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa
Fotoana mitarika amin'ny famokarana betsaka 35 hatramin'ny 45 andro
FANOMEZANA T / T, L / C, Paypal, Western, sns.
- Miovaova: natao ho an'ny vovoka malalaka sy mena ny faritra maro, malefaka ny volon-taolana, manome fampiononana faran'izay betsaka, ary manome vokatra fampiharana mitovy sy marina, manampy amin'ny famoronana endrika tonga lafatra.
- volom-borona avo lenta: fahatsapana malefaka feno, mora ampiasaina, volon-doha sentetika miaraka amin'ny super plush, malama, azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra.
- Mora diovina: borosy Kabuki uki dia borosy makiazy vita tanana vita amin'ny tanana izay diovina matetika mba haharitra ny fahasalaman'ny borosy ary hisorohana ny fandatsahana be loatra.
- Mora entina: borosy Kabuki miaraka amina endrika endrika felany mahafinaritra, mety tsara amin'ny dia na fitsangatsanganana. Borosy fanaovana makiazy tsy maintsy ananana ho an'ny fampiasana matihanina na an-trano.
- Fiantohana kalitao: manome borosy makiazy avo lenta i Dongshen. Mino izahay fa ny hatsaran-tarehy dia avy amintsika rehetra. Ny vokatray dia natao hampamirapiratra ny hatsaranao anaty, ary azo ampiasaina ho fanomezana ho an'ny reny, mpifankatia ary zazavavy amin'ny fialantsasatra.
Ahoana no manadio:
1. Ampiasao amin'ny vera ny antsasaky ny kapoaky ny rano mari-pana.Poem ao anaty vahaolana fanasana ary afangaro tsara.
2. Aroboka anaty rano ny volombava ary alona mandritra ny 3-5 minitra, esory, diovy manaraka ny volombava. Tazomy eo am-pelatananao ny volombava, ary avereno ny fomba fihazonana sy famoahana mba hanesorana tanteraka ny loto tavela sy ny makiazy ao anaty volom-borona.
3. Sasao amin'ny rano mangatsiaka, ampiasao lamba famaohana taratasy mba hahamaina kely ny rano, ary avelao ho maina amin'ny toerana misy rivotra izy.
Teo aloha: Volo vita amin'ny sento vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo maivana sy matevina avo lenta
Manaraka: Flat Top Kabuki Hexagon Face Blush Liquid Powder Foundation Borosy ho an'ny Blending Liquid Foundation
Volavola borosy makiazy
Kitapo vita amin'ny borosy vita amin'ny borosy
Borosy fanamboarana marika manokana
Mametraha makiazy borosy
Kitapo borosy borosy ambongadiny
Volo-sentetika vita amin'ny hazo avo lenta ...
Volo sentetika vegan fotsy matihanina vita amin'ny hazo ...
Dongshen kalitao hazo fotsy avo lenta synth ...
Kolontsaina malefaka avo sy matevina avo lenta ...
Manaova borosy, Barber Shave, Faritra fiharatra, Mametraha makiazy borosy, borosy makiazy napetraka, Fitaovana borosy makiazy,